रेखाको नया फिल्म भदौबाट छायांकन हुने, थापाको अपोजिटमा सौगात मल्ल - www.dthreeonline.com
रेखाको नया फिल्म भदौबाट छायांकन हुने, थापाको अपोजिटमा सौगात मल्ल
प्रकाशित मिति: सोमबार, आषाढ १५, २०७७ समय: १८:३९:१८
काठमाडौँ/ नायिका रेखा थापाले निर्माण गर्ने नयाँ फिल्म भदौ दोस्रो साताबाट छायांकन हुने भएको छ । बैशाखबाट फ्लोरमा जाने भनिएको अनटाइटल फिल्म अब भदौ दोस्रो साताबाट हुने रेखाले बताएकी छिन् । रेखा भन्छिन् -‘कहिले सम्म डराएर बस्ने ? प्राविधिक देखि कलाकार सम्मको रोजिरोटी बन्द हुन लागि सकेको छ ।
सावधानी अपनाएर हरेक क्षेत्र सकृय हुन जरुरी छ । लापरवाही गरे आफैलाई हानी हुने कुरा हो ।’ फिल्म छायांकनमा जान उचित बातावरण हुनु पर्ने र सरकारले पनि फिल्म छायांकनमा जानलाई विषेश सहयोग गर्नु पर्ने रेखाले बताएकी छिन् ।
रेखा र सौगात मल्लको मुख्य भुमिका रहने फिल्मलाई सबिर श्रेष्ठले निर्देशन गर्नेछन् । अब, फिल्मको कथामा भने केही फेरबदल हुने रेखाको भनाई छ । विदेशमा अलपत्र परेको युवा र समग्र बेरोजगार युवाको कथा फिल्ममा समेटिनेछ । लक्ष्मी पुजामा रिलिज हुने भनिएको फिल्मको नयाँ रिलिज मिति भने तय भएको छैन ।
कोरोना महामारीका कारण धेरै फिल्मको रिलिज मिति र छायांकन रोकिएको थियो । रोकिएका फिल्मको रिलिज मिति र छायांकन मिति तय हुन सकिरहेको छैन । हाल लकडाउन केही मात्रामा खुकुलो भएको छ । अब फिल्म क्षेत्र पनि चलायमान हुने देखिएको छ ।
भद्रगोलबाट चर्चामा आएकी रक्षा श्रेष्ठको आज जन्मदिन
ईटहरी/ हाँस्य टलिश्रृङ्खला ‘भद्रगोल’ बाट चर्चामा आएकी रक्षा श्रेष्ठको आज जन्मदिन परेको छ । आज अर्थात असार २२ गते सोमबार ...
साम्राज्ञीले फर्काईन् जवाफ : ‘आजका नारीहरु यति कमजोर छैनन्’
ईटहरी/ नेपाली सिने जगत यतिबेला हरेक विवादले चर्चामा छ । पुजा शर्मा, सुष्मा कार्की, दिपाश्री निरौला, भुवन केसि देखि लिएर ...
पुजा शर्माको बचाउ गर्दै बोले निर्देशक सुदर्शन थापा
ईटहरी/ चलचित्र निर्देशक सुदर्शन थापाले आफ्नी नायिका पूजा शर्माको बचाउ गर्दै कलाकारलाई अभिनयको ज्ञान भए हुने अरू कुराको ज...
एक गीतलाई १२ ओटा भाषामा रेकर्ड गराएर डि.आर उपाध्यायले राखे वर्ल्ड रेकर्ड
ईटहरी/ गीतकार डा. डीआर उपाध्यायले गीत लेखेरै यतीबेला गिनिज अफ वल्र्ड रेकर्डमा एउटा गीत मार्फत आफ्नो नाम लेखाएका छन् । यस...
ईटहरी/ नेपाली सेलिब्रेटीहरु सामाजिक सञ्जाल फेसबुकभन्दा इन्स्टाग्राम बढी प्रयोग गर्ने गर्दछन् । यसलाई कलाकारको लोकप्रियता...
विवादमा बोले प्रदीप, के यो साम्राज्ञीप्रती मौन समर्थन हो ?
ईटहरी/ केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा अभिनेत्री साम्राज्ञी आरएल शाह र अभिनेता भुवन केसीबीच आरोप-प्रत्यारोपको जुहारी चलिरहे...
कमल सिंह र नग्मा श्रेष्ठ मायामा मालामाल